REPUBLICADAINIK | बदनाम नागरिक आन्दोलनका नाममा अस्थिरतामाथि खेल्न खोज्दै पश्चिमाहरू, डलरको खोलो बग्यो - REPUBLICADAINIK
बदनाम नागरिक आन्दोलनका नाममा अस्थिरतामाथि खेल्न खोज्दै पश्चिमाहरू, डलरको खोलो बग्यो
काठमाडौं । ‘कथित’ बृहत नागरिक आन्दोलनका नाममा पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपालमा आफूलाई पुनः सक्रिय बनाउन थालेका छन् । नागरिक आन्दोलनको नाममा सडकमा देखिएका अनुहारहरू विगतमा डलर ल्याएर कुम्ल्याउनेहरूको जमात धेरै छ । अहिले पनि ती अनुहारमध्ये केही अनुहार एनजिओ र आईएनजिओमा संलग्न छन् ।
उनीहरूका गतिविधि धेरै संकास्पद छन् । विगतमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले जातिवादी संघ, संगठनहरूलाई ठूलो लगानी गरेर जातीय हिँसा मच्चाउन खोजेका थिए । पहिलो संविधान सभाका बेला पश्चिमा राष्ट्रहरू अर्थात युरोपियन युनियनका देशहरू हाबी भए पनि दोस्रो संविधान सभामा उनीहरू हाबी हुन सकेनन् । दोस्रो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी भएपछि पश्चिमा राष्ट्रहरू आफै साइड लागेका थिए ।
संसद भङ्ग भएपछि राजनीतिक संकट भएको ठानेर पश्चिमा राष्ट्रहरू फेरि सलवलाएका छन् । नारायण वाग्ले, युग पाठक, खगेन्द्र संग्रौलालगायतका व्यक्तिहरू ‘कथित’ बृहत नागरिक आन्दोलनका नाममा सडकमा देखिएका छन् । यी अनुहारहरू एनजिओ र आईएनजिओसँग निकट भएका थिए । अहिले पनि उनीहरू पश्चिमा राष्ट्रहरूको लगानी रहेका एनजिओ र आईएनजिओमा संलग्नता रहेको आरोप छ ।
नागरिक भनेका को हुन् ? त्यै पढेलेखेका २–४ जना कथित बुद्धिजीवी, केही थान पत्रकार कि केही एनजिओ वा आइएनजिओवाला ? कि अवकाशे सरकारी जीवनमा पेन्सन खाएर सरकारविरुद्ध डकार्ने पूर्व विशिष्ट कर्मचारी ? कि पेन्सन खाने पूर्व प्रोफेसर ? को हो नागरिक समाज ? अनेकौँ प्रश्न उब्जिएका छन् ।
उखुको मूल्य नपाएर मृत्युवरण गर्ने किसान, मलखाद नपाएर उत्पादन गर्न नसकेर ऋणमा डुबेका किसान, कोरोनाकालमा पनि पारिश्रमिक नपाएर थला परेका रिपोर्टर, सडकमा दैनिकी बिताउने गरिब यस्तै ! के यी नागरिक होइनन् ? अनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीविरुद्धको तिम्रो नागरिक समाजमा यिनको प्रतिनिधित्व छ ? भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न पनि उठेका छन् । नागरिक आन्दोलनका नाममा भएको अहिलेको आन्दोलनलाई जनताले पत्याएका छैनन् । नागरिक आन्दोलनमा देखिएका अनुहार स्वार्थी, अवसरवादी र डलरमा बिकेकाहरू रहेको भन्दै जनताले नपत्याएका हुन् ।
विगतमा यस्तै खालका नागरिक समाज र नागरिक आन्दोलनले नेपालमा अस्थिरता ल्याउन खोजेका थिए । जातिवादी संघ, संगठनहरू आफै हराएर गएका छन् । तर, डलर खान पल्केकाहरूले आफूलाई सुधार गर्न सकेका छैनन् । संसद विघटन भएको बहाना बनाएर डलर पचाउने खेल भएको छ । सडकमा २०–३० जना देखिएर नागरिक आन्दोलन हुनेछैन । नागरिक आन्दोलन उठ्नका लागि इमान, इमान्दारिता, विश्वास हुनुपर्नेछ । विदेशीको इशारामा हुने नागरिक आन्दोलनमा जनता हुनेछैनन् ।
नागरिक आन्दोलनमा भन्दा राजनीतिक दलहरूले गरेका आन्दोलन र प्रदर्शनमा जनताको उल्लेख्य सहभागिता देखिने गरेको छ । राजनीतिक दल र नेताहरूलाई जति गाली गरेपनि जनताले उनीहरूलाई नै विश्वास गर्छन् । विदेशको पैसा खाएर तोकिएको आन्दोलन गर्ने नागरिक समाजलाई जनताले बहिस्कार गरिसकेका छन् । कथित नागरिक आन्दोलन बन्द गरेर आफ्नै खेतीपातीमा लागेहुन्छ । ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध राजनीतिक दलहरूनै काफी छन् । पश्चिमा राष्ट्रहरूले दुःख नगरेपनि हुन्छ ।
Published : Thursday, 2021 February 4, 12:04 pm
कांग्रेसको धारणाले ओलीलाई हौसला, भूमिगत गिरोह पनि खुसी
नेविसंघले ओलीको सातो लियो, कम्युनिस्ट मतियार पुलिसहरूको सूची तयार
बर्दिया कांग्रेसद्वारा सदस्यता वितरणबारे परामर्श
कांग्रेस नेतासहितको टोलीद्वारा भाटेकोसी–५ का १२ सय बिद्यार्थीलाई न्यानो बस्त्र हस्तान्तरण
छ अर्बमा भारतले बनाइदिने भयो सेतो मच्छिन्द्रको मन्दिर
नेपालीहरूले लगाएकै कोरोनाविरुद्धको खोप मोदीले लगाए